DEG DEG:- Mas’uul ka bad-baaday qarax miino oo la dhigay dhabarka dambe guri uu degan yahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Mas’uul ka bad-baaday qarax miino oo la dhigay dhabarka dambe guri uu degan yahay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in goordhaw uu qarax miino ka dhacay dhabarka dambe guri uu degan yahay taliyaha saldhiga magaaladaasi Maxamed Xuseen.
Qaraxaasi oo ahaa miino nooca meelaha fog fog laga hago ayaa ahaa mid lagu doonayay in lagu qaarajiyo taliyaha saldhiga magaalada Baardheere Maxamed Xuseen, inkastoo taliyaha uu qaraxaasi ka bad-baaday.
Taliyaha saldhiga magaalada Baardheere ee gobolka Gedo Maxamed Xuseen oo qaraxa ka dib la hadlay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid la dhigay dhabarka dambe ee gurigiisa.
Wuxuu taliyaha sheegay in ruuxii miinada dhigay halkaasi la qabtay, islamarkaana uu haatan ku xiran yahay saldhiga magaalada Baardheere, si baaritaano dheeraad ah loogu sameeyo.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxaan miinada ee maanta ka dhacay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa qeyb ka ah weerarada ka dhanka ah ee lagu bar-tilmaameedsanayo mas’uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona mudooyinkii ugu dambeeysay ay qaraxyada ceynkaasi oo kale kusoo badaneyeen gobolka Gedo.